Miaramila manodidina ny 43000 isa sy fiaramanidina roa afaka mitatitra rano 12000 litatra no efa nahetsika, noho ity tranga ity. Tsy maharaka ny filana anefa ny rano taterin’ireo fiaramanididna ireo ka isan’ny mampanano sarotra ny famonoana ny afo izany. Nanambara ny filoham-pirenena Boliviana fa misokatra amin’ny fiaraha-miasa amin’ny firenen-drehetra izy ireo, manoloana izao voina izao.
Hoan’ny firenena Bresiliana, efa nihetsika ny mpitandro ny filaminana ka nisantatra ny fampiasana ilay fitaovana mandefa rano amin’ny alalan’ny angidim-by ireo nanomboka omaly. Tao anatin’ny 24 ora, loharanon’afo maherinan’ny 1000 no efa tsikaritry ny mpitandro filaminana. Manome tsiny ny fitondrana ny akamaronan’ny mponina, mandeha ny resaka fa mandrisika ny olona handripaka ny ala ny fanjakana. Saingy nanampy azy ireo ireto farany, satria dia nanokana vola maherin’ny 8 tapir’isa euro ny avy amin’ny fitondram-panjakana.
Mbola tsy mahavaha ny olana amin’ny akapobeany izao , hoy ny vahoaka bresiliana. Hatry ny omaly, aman’arivony izy ireo no nidina an-dalambe tao Rio naneho izay tsy fahafam-pony izay.